Entertainment – Live Nepal News
April 5, 2018	Entertainment 0
फिल्म ‘नाई नभन्नु ल ५’ को छायांकन सुरु भएको छ। फिल्म भदौको पहिलो सातादेखि प्रदर्शन गरिने भएका छन् । इलामको चिया बगानमा फिल्मको छायांकन गरिरहेका छन् । निर्देशक विकासराज आचार्यले १ बर्ष भन्दा लामो ग्यापपछि चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल’को पाँचौ श्रृङ्खला बनाउने भएका छन् । यो श्रृङ्खलालाई पनि उनी आफैले निर्देशन गर्दैछन् । …
धरानको विजयपुरस्थित एक कृषकले पालेकाे गार्इले अनाैठाे वाच्छिको जन्म दिएपछि स्थानीयहरू अचम्ममा परेका छन । धरान १४ स्थित इन्द्र कटुवालले पालेको गाइले शरिर एउटै भएको तर दुइवटा मुख भएको अनि ३ वटा आखा भएको अनौठो वाच्छि जन्माएकाे हाे । दोस्रो वेतमा आफ्नो घरमा पालेको गाइले यस्तो वाच्छो को जन्मदिए पछि …
April 4, 2018	Entertainment 0
सायद तिमिले त बिर्सियौ होला त्यो मेरो शरीरको एक थोपा रगत हो भनेर। बिगतलाई एकचोटी फर्केर हेर अनि ईश्वरलाई साक्षी राखेर भन कि- “कतै मैले गलत त गरेको छैन!” भनेर। जोसको बेला होस हुदैन भन्छ्न हो पनि! तर गल्तिलाई एकदिन आवस्य स्वीकार गर्नै पर्छ। तिमीले त मलाई जेम्स नामले परिचय …
महिलालाई कुन समयमा पुरुष देख्ने बितिकै समातेर सेक्स गरु झैँ हुन्छ ?
हामीले समाजमा देख्छौं कि मानिसहरु यौन सम्बन्ध कुराकानी गर्न हिच्किचाउँछन् । तर यो कुरा सत्य हो कि सुखद जीवनका लागि सुखद सेक्स लाइफ हुनु निक्कै जरुरी छ । सेक्स पनि मानिसको जीवनको त्यस्तै आवश्यक्ता हो जस्तै खानु, सुत्नु, दैनिक काम गर्नु । तर कतिपयको जीवनमा सेक्सले अन्य कामले जति महत्व …
यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरु कराउनुको कारण के के हुन् ? जानी राखौ
पछिल्लो अध्ययनले महिलाहरु सम्भोगका बेला ओछ्यानमा समेत बढि आवाज निकाल्ने गरेको कुरा पत्ता लगाएको छ । हालै गरिएको सर्वेक्षणका अनुसार ९६ प्रतिशत महिलाहरु सेक्सका दौरान आफ्नो पुरुष पार्टनरले भन्दा बढि आवाज निकाल्छन् ।यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरु कराउनुको कारण के के हुन् ? जानी राखौ ११ सय ७१ जना मानिसमा गरिएको …
यो वर्षको डेब्यू, कसलाई कति फाप्यो ? अदिती देखी निर्जन सम्म …
वर्ष २०७४ नेपाली सिनेमाका लागि शुभ रह्यो । यो वर्ष नेपाली सिनेमाको बजारमा विदेशी सिनेमाको पकड कमजोर रह्यो भने नेपाली सिनेमाले आफ्नो बजारलाई फराकिलो बनाउँदै लग्यो । सिनेमाको बजार बढ्दै जाँदा यो वर्ष केही कलाकारहरुले अभिनयमा आफ्नो भविष्य खोज्दै सिनेमा प्रवेश गरे । जसमध्ये केहीलाई डेब्यू फाप्यो भने केहीको …
महिला हिंसा भड्काएको भन्दै ज्योति मगरमाथि लाग्यो प्रतिबन्ध !
वैशाखको पहिलो साता इटहरीको तालतलैयामा हुन लागेको महोत्सवमा गायिका तथा कलाकार ज्योति मगरलाई प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । ज्योतिको उत्तेजक प्रस्तुतिले महिला हिंसाको घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताउनुभयो । इनरुवामा आयोजित हिंसा न्यूनीकरण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख गौतमले उच्छृङखल प्रस्तुतिले समाजमा विकृति …